Bit By Bit - သီးသန့်လုံခြုံရေးနှင့်သဘောတူညီချက်ပေါ်လစီ
ဤ website တွင်ကျနော်တို့ Bit သာအားဖြင့် Bit သာ၏ပြီးပြည့်စုံသောစာသားလုပ်နေပါတယ်: အဘယ်သူမျှမကုန်ကျမှာဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်အတွက်လူမှုရေးသုတေသနမရှိနိုင်ပါ။ သင်စာအုပ်ဖတ်နေစဉ်, ကျနော်တို့စုစုပေါင်းအတွက်စာဖတ်သူကိုအပြုအမူတိုင်းတာကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျနော်တို့စာအုပ်၏အပိုင်းအများဆုံးမကြာခဏဖတ်ရသောတိုင်းဖြစ်ကြသည်။ ဒီ data စာအုပ်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်လည်းစမ်းသပ်ချက်-လေ့ကိုခေါ်ပြေးနေကြတယ် A / B ကိုစမ်းသပ်မှုတွေ ကိုစာအုပ်ပိုမိတ္တူရောင်းချကူညီနိုင်ဖို့နှစ်ဆပိုများလာ။ ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာအရာအားလုံးခေတ်သစ်ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာဘုံဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကိုအောက်တွင်အသေးစိတ်အတွက်ဖော်ပြဖို့နှင့်ငါတို့သည်အဘယ်သို့ပြုသည်ကိုကျနော်တို့အပေါ်လေ့လာသင်ယူအရာကိုသရုပျဖျောလိမျ့မညျ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ် ။
ကျနော်တို့ကိုသုံး Google Analytics သင်ဤ website ကိုနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဘယ်လိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းရန်။ ထို့ပြင်အများဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက်များကဲ့သို့ကြှနျုပျတို့အသုံးပွုရ cookies တွေကို , သင့်အတှေ့အကွုံမြှင့်တင်ရန်ယေဘုယျဧည့်သည်သတင်းအချက်အလက်စုဝေးစေပြီးလျှင်, ကြှနျုပျတို့၏ website မှလာရောက်လည်ပတ်သူကိုခြေရာခံရန်။ အကိုဖတ်ရှုပါ "ကျနော်တို့ cookies တွေကိုအသုံးပြုကြတာလဲ?" cookies နဲ့ငါတို့သည်အဘယ်သို့သူတို့ကိုအသုံးချမျာ​​းအတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအပိုင်း။
ကျနော်တို့စုဆောင်းသောသတင်းအချက်အလက်မဆိုစာအုပ်ကိုတိုးတက်လာဖို့, သုတေသနအတွက်အသုံးပြုစေခြင်းငှါ၎င်း, စာအုပ်ရောင်းချကိုကူညီ။
ကျနော်တို့ရှိသည်သော browsing အတွက်သတင်းအချက်အလက်အများစုကိုသိမ်းဆည်း Google Analytics , သင်သည်သူတို့၏အကြောင်းကိုပိုမိုဖတျရှုနိုငျ လုံခြုံရေးနှင့် privacy ကိုအခြေခံမူ ။
သငျသညျ add ကြောင်းမှတ်စာများကစီမံခန့်ခွဲကြသည် hypothes.is , သင်သည်သူတို့၏အကြောင်းကိုပိုမိုဖတျရှုနိုငျ ဝန်ဆောင်မှု၏စည်းကမ်းချက်များကို ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ website ကိုအားဖြင့်တည်ခင်းဧည်ဖြစ်ပါတယ် Github စာမျက်နှာများ , သင် Github ရဲ့အကြောင်းပိုမိုဖတျရှုနိုငျ ဝန်ဆောင်မှု၏စည်းကမ်းချက်များကို ။
ကျွန်တော်တို့ cookies တွေကိုကိုသုံးသလား?
ဟုတ်ပါတယ်။ Cookies တွေကို သင့်ရဲ့ browser ကိုအသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်အချို့သောသတင်းအချက်အလက်ကိုဖမ်းယူခြင်းနှင့်သတိရဖို့ဆိုဒ်များသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုပေးစနစ်များနိုင်ပါတယ်ကြောင်း (သင်ခွင့်ပြုပါလျှင်) သင်၏ဝဘ်ဘရောက်ဇာကိုတဆင့်သင့်ကွန်ပျူတာ၏ hard drive ကိုမှ site တစ်ခုသို့မဟုတ်ယင်း၏ service provider ကလွှဲပြောင်းကြောင်းသေးငယ်တဲ့ဖိုင်တွေဖြစ်ကြသည်။
သငျသညျပိုကောင်းတဲ့ site ကိုအတှေ့အကွုံကိုပူဇော်နိုင်ဖို့အတွက်ကျနော်တို့နားလည်ကယ်တင်သင့်ရဲ့ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုအနာဂတ်လာရောက်လည်ပတ်သူအဘို့နှင့်ဆိုက်အသွားအလာနှင့် ပတ်သက်. စုစုပေါင်း data တွေကို compile မှကွတ်ကီးကိုသုံးပါ။
ကျနော်တို့ဤမျှကာလပတ်လုံးသူတို့အားပါတီများလျှို့ဝှက်ဤအချက်အလက်စောင့်ရှောက်ဖို့သဘောတူသကဲ့သို့, ကုန်သွယ်ရောင်းချ, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကို operating သုတေသနလုပ်ငန်းပို့ချ, ဒါမှမဟုတ်သင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီသူကိုယုံကြည်စိတ်ချရသောတတိယပါတီများ မှလွဲ. ပြင်ပမှာပါတီများရန်သင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဆိုင်ရာအချက်အလက်များလွှဲပြောင်းပါဘူး ။ ကျနော်တို့လည်းငါတို့လွှတ်ပေးရန်ဥပဒေနှင့်အလိုက်လျောဖို့သင့်လျော်သောယုံကြည်လျှင်, သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုလွှတ်ပေးရန်ကြှနျုပျတို့၏ site မူဝါဒများပြဋ္ဌာန်းရန်, ဒါမှမဟုတ်ငါတို့ကာကွယ်သို့မဟုတျအခွားသူမြား '' အခွင့်အရေး, အိမ်ခြံမြေ, ဒါမှမဟုတ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုလိမ့်မည်။
ရံဖန်ရံခါကျွန်တော်တို့ရဲ့သမ္မာသတိမှာ, ကျနော်တို့တတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုဒ်များမှလင့်များပါဝင်နိုင်သည်။ ဤတတိယပါတီဆိုဒ်များသီးခြားနှင့်လွတ်လပ်သော privacy ကိုမူဝါဒများရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့သည်ထို့ကြောင့်ဤဆက်နွယ်နေဆိုဒ်များများ၏ content နှင့်လှုပ်ရှားမှုများအဘို့အဘယ်သူမျှမတာဝန်သို့မဟုတ်တာဝန်ယူမှုရှိသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ၏သမာဓိကာကွယ်ပေးဖို့ကိုရှာခြင်းနှင့်ဤဆိုဒ်များနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်တုံ့ပြန်ချက်ကြိုဆိုပါတယ်။
ကြှနျုပျတို့၏ site သုံးခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ privacy ကိုမူဝါဒသဘောတူသည်။
သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်တစ်စောင်ပေးပို့ပါ info@bitbybitbook.com ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောသမ္မာသတိမှာအခြိနျမှနျမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ privacy ကိုမူဝါဒကိုပြောင်းလဲခွင့်ရှိသည်။ အချိန်ပိုင်းသီးသန့်လုံခြုံရေးနှင့်သဘောတူညီချက်ပေါ်လစီ၏လက်ရှိ version ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ဤအပိုင်းကိုစစ်ဆေးပါ။ အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်မူဝါဒများကိုအောက်တွင်တင်ပြကြသည်, နှင့်မဆိုအပြောင်းအလဲများလိုအပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစာမျက်နှာကို update ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။